कसरी गर्ने प्रेममा आउने अड्चनहरूको समाधान
प्रेमको नाममा कतिपय मान्छे धोखामा परिरहेको छ भने प्रेमकै कारण कतिपय ठाऊँहरुमा विभिन्न खालका दुर्घटना पनि निम्तिरहेको छ । प्रेमले सुख दिनपर्ने ठाऊँमा कतिलाई झन दुःख पनि दिइरहेको छ । प्रेमलाई कसरी सफल गराउने भन्ने सवाल पनि तड्कारो भएर उठिरहेको छ ।
नयाँ पीँडी प्रेमको व्यवहारमा बढी क्रेजी भइरहेको छ । कतिपया अवस्थामा प्रेममा फस्नुभन्दा पहिला विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरुमा विचार पुर्याउन नसक्दा विभिन्न जटिलताहरू पनि आइरहेका छन् यसै सन्दर्भमा वास्तविक प्रेम के हो ? यसलाई कसरी सफल गराउने ? सफल प्रेमसम्बन्धको लागि प्रेम गर्नुभन्दा पहिला ध्यान दिन पर्ने कुराहरूके के हुन् ?
प्रेमसँग सम्बन्धित विषयमा महत्तवपूर्ण एउटा सामाग्री यहाँहरुको लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।